RFID လက်ကောက်ဝတ်-လက်ပတ်နာရီထိကပေါက်ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NFC watch buckle silicone Bracelet
RFID လက်ကောက်ဝတ်-လက်ပတ်နာရီထိကပေါက်ဆီလီကွန်လက်ပတ်, ထိကပေါက်ဆီလီကွန်လက်ကောက် watch
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ, လက်ပတ် / လက်ကောက် NFC watch buckle silicone Bracelet, NFC watch buckle soft silicone Bracelet, RFID လက်ကောက်ဝတ်-လက်ပတ်နာရီထိကပေါက်ဆီလီကွန်လက်ပတ်, RFID wrist-watch buckle soft silicone Wristband
RFID wrist-watch buckle wristbands, nice, flexible, adjustable the wristband length adjustment holes, suitable wear for different thick wrist, easy to wear, အသုံးပြုရလွယ်ကူ, ရေစိုခံ, damp proof, shockproof, and high temperature resistance.
အရွယ်: 21.35× 2cm, စိတ်ကြိုက်
အရောင်: ပြာသော, အနီေရာင်, အနက်ရောင်, အဖြူ, ဝါသော, မီးခိုးရောင်, စိမ်းလန်းသော, ပန်းရောင်, စသည်တို့ကို.
encapsulation တွေကိုသေချာ chip ကို: LF (125kHz): EM4102, TK4100, EM4200, EM4305, T5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S က
HF (13.56MHz): FM11RF08, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare Ultralight, ငါ-CODE2, TI2048, SRI512
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF (860MHz-960MHz): UCODE GEN2, ဂြိုလ်သား h3, Impinj M4, etc.
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -30℃ ~ + 75 ℃ (-22℉ ~ + 167 ℉)
Can encapsulation two type frequency RFID chip, to achieveavariety of purposes. Surface can be silk screen pattern, လိုဂို, code and so on.
Extremely humid environments campus, အပန်းဖြေဥယျာဉ်, ဘတ်စ်ကား, residential access control, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, လယ်ပြင်စစ်ဆင်ရေး.
I am interested in your product RFID wrist-watch buckle silicone Wristband, ထိကပေါက်ဆီလီကွန်လက်ကောက် watch
prev: NFC ကိုပျော့ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NFC ကိုအသိဉာဏ်နီးကပ်ဆီလီကွန်လက်ကောက်
နောက်တစ်ခု: RFID လက်ကောက်ဝတ်-လက်ပတ်နာရီကိုစတိုင်အပျော့ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NFC ကိုချိန်ညှိလက်ပတ်
ACR1255U-J1 NFC ကိုဘလူးတုသ် NFC ကို Reader ကို Secure
SONY Felica Chip ကဒ်
LF / HF Reader ကို (17)